लुम्बिनीबाट को–को छन् पदाधिकारी आकांक्षी ? – Dainik Lumbini
लुम्बिनीबाट को–को छन् पदाधिकारी आकांक्षी ?
नेकपा एमालेको १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनमा सुरु हुँदैछ । महाधिवेशनका लागि २ हजार प्रतिनिधिसहित नेता कार्यकर्ता चितवन पुगेका छन् । चितवनको नारायणी किनारमा एमालेले महाधिवेशन गर्न लागेको हो ।
महाधिवेशनमा ५ लाख जनसहभागिता हुने बताइएको छ । विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेको एमालेले यो अधिवेशनबाट आगामी ५ वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ ।
महाविधेशनका लागि जिल्लाबाट कार्यकर्ताहरु चितवन पुग्नेक्रम जारी छ । पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले रातभरीमा महाविधेशनको तयारी सकिने र दिउँसो उद्घाटन हुने बताए उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित दलका शीर्ष नेताहरु चितवन आएका छन् ।
महाधिवेशनमा दुई हजार १ सय ७५ प्रतिनिधि र १०३ जना परिवेक्षक सहभागी हुनेछन् । प्रतिनिधि भूगोल, जनसङ्गठन, विभाग र सम्पर्क कमिटी र प्रवासबाट सहभागी हुँदैछन् । भट्टराईका अनुसार प्रतिनिधिमध्ये पाँच प्रतिशत अर्थात १०६ जना मनोनित गरिएका हुन् । प्रतिनिधिमा २०९ जना दलित, उत्पीडित र ६२७ जना महिला रहेको उनले जानकारी दिए । कूल प्रतिनिधि संख्याको ३० प्रतिशत महिला, १० प्रतिशत हाराहारी दलित, उत्पीडित रहेको उनको भनाइ थियो । महाधिवेशनमा सल्लाहकार १५ सहित पाका–पुराना १०३ जना परिवेक्षक रहनेछन् । उद्घाटन सत्रका दिन पाँच हजार स्वयंसेवक परिचालन हुने उनले जानकारी दिए ।
भट्टराईका अनुसार भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, कम्बोडियालगायतका देशबाट राजनैतिक दलका प्रतिनिधि आउने छन् । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको भिडियो सन्देश प्राप्त भएको छ भने विभिन्न देशका राजनीतिक दलका शुभकामना सन्देश प्राप्त भएका छन् । कोरोनाका कारण धेरै देशबाट पाहुनाहरु उपस्थित हुन नसकेको सो अवसरमा जानकारी दिइएको थियो ।
उद्घाटन सत्रपछि मङ्सिर ११ गते बिहान ८ः३० बजेदेखि सौराहामा बन्दसत्र सुरु हुने छ । अध्यक्ष मण्डल र माइन्युट कमिटी बनिसकेका छन् । बन्दसत्रमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र विदेशी पाहुनाहरुले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सोही दिन उम्मेद्वारी दर्ता, दाबी विरोध र फिर्ता समेतको प्रक्रिया सकेर साँझ ६ बजे अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिने छ । मङ्सिर १२ गते बिहान ८ बजेदेखि मतदान प्रक्रिया सुरु हुनेछ । मतदानका लागि १०० वटा भोटिङ मेसिन तयार गरिएको छ । तीमध्ये ९० वटामा मतदान गरिने छ भने १० वटा जगेडाका रूपमा राखिने छ । सोही दिन साँझसम्ममा मत परिणाम आउने उनले जानकारी दिए ।
पदाधिकारीमा लुम्बिनीका आकांक्षी धेरै
नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट चयन हुने नयाँ नेतृत्वमा लुम्बिनी प्रदेशले बलियो उपस्थिति जनाउने देखिएको छ । नेताहरुको आकांक्षाले उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिवसहितका पदमै लुम्बिनीले मौका पाउनेछ । लुम्बिनी एमालेको आधार इलाका मानिन्छ ।
अध्यक्ष र वरिष्ट उपाध्यक्ष पद बाहेका पदमा लुम्बिनीका नेताको दाबी छ । शक्तिशाली पद महासचिवमा हालका उप–महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेलको दाबी छ । माओवादीबाट एमाले रोजेका टोपबहादुर रायमाझी उपाध्यक्ष वा महासचिव पद पाउनुपर्ने अडानमा छन् ।
माधव नेपाललाई छाडेर एमालेमै बसेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, उप–महासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव गोकर्ण विष्टको पदाधिकारीमा दोहोरिने आकांक्षा छ । सचिव प्रदीप ज्ञवाली तथा छविलाल विश्वकर्मा, मणि थापा, राधा ज्ञवालीलगायतले पनि पदाधिकारीमा दाबी गरेका छन् । केन्द्रीय सदस्यसहितका पदमा दलबहादुर राना, केन्द्रीय सदस्य खिमलाल भट्टराई, सूर्य थापा, बैजनाथ चौधरी, नजिर मियाँ, लीला गिरी मैदानमा छन् ।
यसका साथै पूर्व माओवादीका नेता दधिराम शर्मा न्यौपाने, चन्द्रबहादुर खड्का, दिनेश पन्थीलगायतका नेता उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छन् ।
युवराज ज्ञवाली उपाध्यक्षमा नै दोहोरिने आकांक्षामा छन् । उप–महासचिव घनश्याम भुसाल पनि उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिने तयारीमा रहेको बताइएको छ । सचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र गोकर्ण विष्ट पनि सम्मानजनक पदको खोजीमा छन् ।
समावेशीका हिसाबले स्थायी कमिटी सदस्य छबिलाल विश्वकर्माले पदाधिकारीको दाबी गरेका छन् । त्यस्तै राधा ज्ञवालीले सचिवमा दाबी गरेकी छन् ।
लुम्बिनी एमालेको गढसमेत भएकाले नेताहरूले महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटीमा उपस्थिति दाबी गर्नु स्वाभाविक भएको एमालेका नेता तथा लुम्बिनीका प्रचारप्रसार विभागका संयोजक झपेन्द्र जिसी बताउँछन् ।
रुपन्देहीबाट बुटवल उप–महानगरका पूर्वमेयर तथा प्रदेश सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठ, एमाले रूपन्देही अध्यक्ष तथा बुटवल उप–महानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदी, प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल, प्रदेश सांसद तुलसी चौधरी, नेताद्वय बलबहादुर आचार्य, सावित्रा अर्याल, बुटवलका उपप्रमुख गोमा आचार्य, तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख बासु घिमिरे केन्द्रीय सदस्यका नयाँ आकांक्षी हुन् ।
रुपन्देही उप–महासचिवद्वय विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसालको गृह जिल्ला पनि हो । यहाँका नेताहरूमाथि केन्द्रीय कमिटीमा को–कोलाई ल्याउने भन्ने विषयमा दबाब सुरु भएको छ । नेताहरूको व्यवस्थापन नगरे थप जटिल हुने भएकाले दबाब परेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।
दाङबाट पनि आकांक्षी धेरै छन् । एमाले नेत्री गंगा चौधरी, जिल्ला अध्यक्ष टीकाराम खड्का, तुलसीपुर उप–महानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डे, प्रदेश सांसद सरस्वती गौतम, रेवतीरमण शर्मा घिमिरे, घोराही उप–महानगरपालिकाका प्रमुख नरूलाल चौधरी, लमही नगरपालिकाका मेयर कुलबहादुर खत्रीले केन्द्रीय सदस्यका लागि आकांक्षा व्यक्त गरेका छन् ।
कपिलवस्तुबाट बलराम अधिकारी, विश्रामप्रसाद थारू, शान्तिदेवी चमार, प्रदेशसभा सदस्य विष्णु पन्थी केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षी हुन् । लुम्बिनीमा वडा, पालिका अधिवेशनबाट अधिकांश प्रतिनिधि सर्वसम्मत छनोट भएका छन् । लुम्बिनीका मात्रै पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटीमा कम्तीमा ५० जनाको दाबी देखिएको छ । पश्चिम नवलपरासीबाट जिल्ला अध्यक्ष तुलसी पासी, केन्द्रीय स्कूल विभागका सदस्य बद्रीनाथ खनाल, अनेमसंघका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य विमला अर्याल लगायत नेताहरू केन्द्रीय कमिटीको लबिङमा छन् ।
गुल्मीका माओवादीबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएर एमाले प्रवेश गरेका दिनेश पन्थी केन्द्रीय कमिटीमा जान इच्छुक छन् । प्यूठानका प्रदेश सांसद हरि रिजाल, बाँकेका कविराम थारू, रुकुम पूर्वबाट आशा स्वर्णकारलगायतका नेताले केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षीका रूपमा नेताहरूलाई दबाब दिएका छन् ।
५ अर्वको दूध स्टक
नयाँ बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री, खोप ल्याउन २६ अर्ब बजेट